अरबको क्वारेन्टाइनबाट कोरोना अनुभव Bizshala -
अरबको क्वारेन्टाइनबाट कोरोना अनुभव
म अहिले सयुक्त अरब इमिरेट्स युएईको दुवईमा छु । म रोजगारीका लागि खाडी आएको नेपालीको प्रतिनिधि एक पात्र हुँ । जो घरको वाध्यतालाई धान्नकै लागि देशमा लकडाउन भइरहँदा र राजधानीमा निषेधआज्ञा जारी भइरहँदा पनि हरियो पासपोर्ट देखाएर बालबालिकाको पेट सम्झिँदै देश छोडेर हिँडेको नागरिक हुँ । जतिबेला विदेशमा रहेका अन्य नेपाली दाजुभाईहरु देश कसरी फर्किने भनेर सोचिरहेका थिए र अहिले पनि कति बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरु मुलुक फर्किने सपना बोकेरै बसिरहेका छन् ।
म यहाँको एक पाँचतारे होटलका काम गर्छु । विश्वव्यापी महामारीको बेला मैले यो देशमा देखेका र आफैँले भोगेका केही अनुभव साट्न चाहेको छु ।
मलाई लाग्छ मेरो अनुभव केही न केही रुपमा देशका साना तथा ठूला व्यापारिक क्षेत्रमा सहयोगी बन्नसक्छ । यहाँ कोभिड १९ को संक्रमणलाई न्यूनिकरण गर्न के गरिएको छ, हामी के गर्दैर्छौ ?सरकारले के गर्दैछ ? जनताले कसरी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुराहरु मेरो अनुभवको आधारमा सेयर गर्नेछु ।
अहिले म कम्पनीले उपलव्ध गराएको क्वारेन्टाइनमा छु । मसँगै काम गर्ने सहकर्मीलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएपछि म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्गमा परेर १४ दिनको आइसुलेसनमा बस्नु परेको हो । म बसेको देशमा पनि नेपालमा जस्तै दैनिक १ हजार , बाह्र सयको हाराहारीमा पोजेटिभ केस आउने गरेको छ । तर यहाँको चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन शैलीले कोरोना न्यूनिकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसो त युएई यस्तो देश हो जसले अहिलेसम्मै धेरै सँख्यामा पिसिआर टेस्ट गरेर नाम राखिसकेको छ । नागरिक अथवा यहाँ बसोबास गर्नेले अनुरोध गरेकै भरमा मोवाइल ल्याब्रोटरी लेखिएको गाडी नै पिसिआर टेष्टका लागि पठाइने गरेको छ । अरुले भनेजस्तो लथालिंग छैन यहाँको अवस्था । व्यापारहरु चलिरहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय उडान चालु छ, उद्योगधन्दा सबै चलेका छन् सरकारलाई पब्लिक एरियामा माक्स अनिवार्य लगाउन भनेर उर्दी जारी गरेको छ । साथै सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नुपर्छ ।
सवारी साधनमा नर्मलभन्दा ५० प्रतिशत कम यात्रु मात्र बोक्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । सबै चलेकै छन् । मेट्रो रेल पनि चलेको छ, दैनिक हजारौले त्यो सेवा पनि लिएका छन् । होटल, सपिङ्ग मल सबै राम्ररी नै चलेका छन् । अन्तराष्ट्रिय पर्यटकको आगमन केही कम भएका कारण केही होटलहरु लकडाउन पछि खुलेका छैनन् । होटल, सपिङ्ग मलको प्रवेशद्वारमा थर्मल क्यामरा जडान गरिएका छन् र ठूलो स्क्रिन राखिएका छन् । थर्मल क्यामराले त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सबैको तापक्रम नाप्छ र सुरक्षित गर्छ । उच्च तापक्रम अर्थात ३७ दशमलव ३ भन्दा बढि तापक्रम भएका सेवाग्राहीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । उनीहरुले तत्काल डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ ।
यहाँको सरकारले हरेक व्यापारिक घरानालाई कोरोना न्यूनिकरणमा भूमिका खेलाएको छ । हरेक साना ठूला कम्पनीमा कन्ट्याक्ट ट्रेसरहरु नियुक्त भएका छन् । उनीहरुले आफ्नो कम्पनीको जिम्मा लिएका छन् र सिधै यहाँको स्वास्थ्य विभागसँग समन्वय गर्छन । हरेक सेवाग्राही र कर्मचारी सबैले पिपिई अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युप्मेन्ट लगाएको हुनुपर्छ । होटलहरुले हरेक पाहुनालाई माक्स लगाउन अनुरोध गर्छन र पाहुनासँग नभए माक्स निशुल्क उपलव्ध गराउँछन् ।
बेला बेलामा सरकारी निकायबाट आउने चेकजाँचमा माक्स नलगाई पव्लिक एरियामा पाहुना भेटियो भने होटलले ठुलो रकमको जरिवाना तिर्नुपर्छ । यहाँ आफ्नो मान्छे ठाउँमा भएको आधारमा जरिवाना मिनाहा हुने चलन छैन । होटल रेस्टुरेन्ट खोल्न दिइएपनि बार भने खोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने तथा अन्य कुनै कोरोनाको लक्षण भएमा कर्मचारीलाई काममा नआउन र तुरुन्त डाक्टरकोमा जान भनिएको हुन्छ । यदि कुनै पाहुनालाई अथवा कर्मचारीलाई कोरोना लागेको पुष्टि भएमा उनीहरु यहाँको सरकारको गाइडलाइनअन्तर्गत अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ ।
क्वारेन्टाइनमा अलग्गै कोठा, अलग ट्वाइलेट वाथरुम, लगायतका सुविधा हुनुपर्ने छ । पाहुनालाई कोरोना पुष्टि भएमा सरकारले तोकेका होटल क्वारेन्टाइन स्थानान्तरण गरिन्छ, त्यो पनि सरकारकै निगरानीमा । पाहुना तथा कर्मचारी जोकोही पनि कोरोनाको बिरामी भएको दिनदेखि ३ दिन पहिले देखिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गरिन्छ । यहाँको स्वास्थ्य बिभागले तोकेको कन्ट्याक्ट ट्रेसरले आफ्नो कर्मचारीको अवस्था के कस्तो छ ? देनिक कत्तिको सुधार भइरहेको छ भनेर अपडेट दिइरहनु पर्छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग चाहिँ सुरक्षा सावधानी नपअनाएको, १५ मिनेटभन्दा बढी फेस टु फेस वार्तालाप गरेको, कोठा तथा बेड सेयर गरेर बस्ने तथा एउटै कोठाभित्र बस्ने स्टाफ कर्मचारी आउने गर्दछन् ।
यसरी बस्ने सबैले १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भने । सुरक्षा सावधानिका साथ सामान्य भेट गर्नेहरुको हकमा भने उनिहरुलाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई नजिकैबाट नियाल्न र सावधानिका साथ बस्न अनुरोध गरिन्छ ।
यो देशलाई पनि विश्वव्यापी महामारीमा निकै ठुलो मार पर्यो । यही सालका लागि तोकिएको विश्वव्यापी एक्स्पो २०२० का लागि यो देशको एक प्रान्त दुवईले अर्बौ डलर खर्च गरेको थियो । तर कोभिड १९ कै कारण त्यो एक्स्पो अर्थात विश्वव्यापी मेला एकसालका लागि पर सारिएको छ । तर युएईले कोभिडबाट ग्रस्त भएको त्यत्ति ठूलो महसुस गर्न परेको छैन । मैले अघि भनेझैँ यो महामारीबाट अछुतो त कोही पनि रहन सकेको छैन, तथापि जुन रुपमा युरोपियन देशहरुले क्षति व्यहोेरेका छन् त्यो रुपमा युएईले क्षति व्यहोर्न परेन । हो सानादेखि ठूला व्यापार व्यवसाय धारासायी भए । २/३ महिना लकडाउन हँदा कति त उठ्न नसक्ने गरी लडेका छन्, तर सरकारले उनीहरुलाई उठ्न साहस र हौसला उत्तिकै दिएको छ ।
लकडाउनका कारण भिषा थप गर्न नपाएकाहरुलाई छुट दिएको छ उनीहरु अहिले भटाभट भिषा नवीकरण गरिरहेका छन् । निश्चित मापदण्ड अपनाएर सबै व्यापार व्यावसाय खुलाइएका छन् । हामी पनि यसैगरी विदेशीहरुले अपनाएको जस्तै तरिका अपनाउँ । नागरिक पनि सजग बनौं । घरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रुपमा माक्सको प्रयोग गरौँ । सामाजिक दूरी कायम राखौँ । अनावश्यक भिडभाड नगरौँ । व्यापार व्यावसायमा पनि केही नयाँ प्रयोगहरु गरौँ । कोरोनासँग लड्न सबै एकजुट होऔँ ।
एउटा सानो चिप, जसको कमीले धमाधम बन्द हुँदैछन् विश्वभरका कार उत्पादन गर्ने कारखाना
भारतले बुधबारदेखि नेपालसहित विभिन्न मुलुकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने
पिपुल्स हाइड्रोपावरले रु. ८२.५ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल
'म पाँच वर्ष ननुहाएको चिकित्सक हुँ'
मार्गरिटा रोड्रिगेज -बीबीसी न्यूज मुन्डो “म एकदमै राम्रो महसुस...
मालिक हुन् त यस्ता, जो कर्मचारीका लागि भगवान साबित भए !
काठमाण्डौ । कुनै पनि कम्पनी वा उद्योगधन्दा एक्लो प्रयासमात्र चलाउन...
रु. १२० मा बिक्यो २ अर्ब डलरको कम्पनी !
काठमाण्डौ । कोही अर्बपति उद्योगपतिले आफ्नो २ अर्ब डलरको कम्पनी १२०...
यी हुन् नौवर्षे युट्युबर, जसले यो वर्षमात्रै कमाए रु. ३५२ करोड
काठमाण्डौ । त्यसो त ९ वर्षको उमेर बच्चाका लागि खेल्ने, कुद्ने र...
एक व्यक्तिले रेस्टुराँमा खाए २०५ डलरको खाना, दिए ५००० डलर टिप
काठमाण्डौ । जब तपाइँ कुनै रेस्टुराँमा खाना खान जानुहुन्छ तब तपाइँ...
काठमाण्डौ । यदि तौल कम गर्न चाहनुहुन्छ भने थोरै खानुहुन्छ अनि धेरै...
कम उमेरमै मनग्य पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? यी ३ टिप्स् अवश्यक
काठमाण्डौ । कोरोनाकालमा देशको अर्थव्यवस्था र मानिसको आर्थिक हालत...
एउटै परेवा पौने २३ करोडमा बिक्यो, के छन् त्यस्ता विशेषता ?
काठमाण्डौ । बेल्जियममा एउटा रेसर परेवा १९ लाख डलर (२२ करोड ६२ लाख...